NUG ကိုယ်စားပြု ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထ – PVTV Myanmar
NUG ကိုယ်စားပြု ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထ
NUG ကိုယ်စားပြု ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကို ဒီမိုကရေစီသူရဲကောင်းအဖြစ် International Republican Institute (IRI) က John McCain Freedom Award ဆု ချီးမြှင့်မည်
၈ အောက်တိုဘာလ ၂၀၂၁
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် အသံအမတ်ကြီးကျော်မိုးထွန်းကို ဒီမိုကရေစီသူရဲကောင်းအဖြစ် International Republican Institute (IRI) ကလာမယ့်အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့မှာ John McCain Freedom Award ဆု ချီးမြှင့်မယ်လို့သိရပါတယ်။
Freedom Award ဆုရရှိသူတွေကတော့လစ်သူယေးနီးယား ဝန်ကြီးချူပ် Ingrida Symonyte ၊ ကုသမဂ္ဂဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း၊ ဘယ်လာရုစ် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အတွက် ပေါင်းစည်းညှိနိုင်းရေး ကောင်စီ ကိုယ်စားလှယ် Tatsiana Khomich နဲ့ ကျူးဘားနဲ့ဂျာမနီအနုပညာဆုရရှိထားတဲ့ Willy Chilino တို့ဖြစ်ကြောင်း Freedom Award က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
အဲဒီဆုပေးပွဲကို ရီပတ်ဗလီကင် အထက်လွတ်တော် ခေါင်းဆောင် ဆီးနိတ်တာ Mitch McConnell၊IRI ဥက္ကဌ ဆီးနိတ်တာ Dan Sullivan၊ ဆီးနိတ်တာ Joni Ernst ၊ ဆီးနိတ်တာ Lindsey Graham နဲ့ ဆီးနိတ်တာ Rick
Scott တို့ တက်ရောက်ကြပါမယ်။
IRI ဟာ၁၉၉၅ ခုနှစ်မစပြီး Freedom Award ကို ဒီမိုကရေစီတိုးတက်မှုအတွက်ကတိကဝတ်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ဒီမိုကရေစီ လွတ်လပ်မှုနဲ့လူသားလွတ်မြောက်မှု ၊ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိသန်းပေါင်းများစွာသောလူတွေ အတွက်အခွင့် အလမ်းတွေဖန်တီးပေးခဲ့သူတွေကို ဂုဏ်ပြုတာပါ။ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာ Freedom Award ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။
Hnin Ei Ei Hlaing says:
Thidar Htun says:
2021-10-08 at 9:04 AM
Congratulations. ဦးကျော်မိုးထွန်း အောင်မြင်ပါစေ။ ကျန်းမာပါစေ။
Mi Swe says:
Kyu Kyu Saw says:
2021-10-08 at 9:05 AM
Aung Zaw Lynn says:
2021-10-08 at 9:07 AM
Unty Cho says:
Nyein Chan Maung says:
Very Congratulations ပါခင်ဗျာ
ゆきり り ゆき says:
Zin Mar Oo says:
2021-10-08 at 9:11 AM
Congratulation ပါ သံအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်း
ထား သခင္ says:
ဟိုအုပ်စုတော့ ဒေါသဖြစ်လွန်းလို့ တက်သေကုန်တော့မှာဘဲ
လေးစား ဂုဏ်ယူပါတယ် သံအမတ်ကြီး ဉီးကျော်မိုးထွန်း၊
ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် အားထုတ် ကြိုးစားမှုတွေအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊
Khin Myint Kyi Kmk says:
2021-10-08 at 9:15 AM
Nyein Mahar Hero Htet says:
2021-10-08 at 9:17 AM
ထိုက်တန်ပါတယ် Congratulations 🎉👏🎉👏
Deborah Myint says:
Zin Zin Thaw says:
2021-10-08 at 9:18 AM
Congratulations par သံအမတ်ကြီး
Pho Thar says:
2021-10-08 at 9:20 AM
သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း ကျန်းမာပါစေ ဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေ
2021-10-08 at 9:23 AM
ဂုဏ်ယူ ပါတယ် သံအမတ်ကြီးရှင့်..
Nwe Nwe Thaung says:
2021-10-08 at 9:26 AM
Big Congrstulations! ဦး‌ေကျာ်မိုးထွန်း
2021-10-08 at 9:31 AM
You are doing good for others so this is the great reward for you.
Win Ohnmar Than says:
2021-10-08 at 9:32 AM
Hline Yu Nwe says:
မပြုတ်တဲ့အပြင်ဆုတောင်ရလိုက်သေးတာလားတဲ့ ဟီးဟီးဟီးတဲ့ သွားပါပြီတဲ့ 😂😂 ဘောမရက်ကွက်က ငိုသံကြီးအကျယ်ကြီးကြားနေရတယ် ကြားကြလား ကြားကြလား😂😂😂
2021-10-08 at 9:38 AM
ထိုက်တန်ပါတယ်နော် Congratulationsပါရှင် မြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့အတူတကွ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့အတွက် မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို အကန့်အသတ်မရှိဘဲ ရရှိစံစား ခံစားရပါစေ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းအသက်ရှည်ကျန်းမာ ဘေးရန်ကင်းပါစေ ကြံသမျှ ပြောသမျှ လုပ်သမျှ အစစအရာရာအဆင်ပြေပါစေ။
Aye Nyeint Nyeint Aung says:
2021-10-08 at 9:40 AM
congratulations ပါ ဦးကျော်မိုးထွန်း
Daw Aye Shwe says:
Aung Htun says:
2021-10-08 at 10:24 AM
သံအမတ်ကြီး “ဦးကျော်မိုးထွန်း “အါး ဂုဏ်ယူဝမ်း​မြောက် လေးစားပါတယ်ဗျာ –
Yaw Myu Mang says:
2021-10-08 at 10:36 AM
Padauk Wah says:
2021-10-08 at 11:13 AM
Congratulations ပါသံအမတ်ကြီးရှင် ဝမ်းသာ ဂုဏ်ယူ ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ သံအမတ်ကြီလဲ​ဘေးကင်းရန်ကွာပြီး ဘုန်းတန်ကိုး​တွေဒိထက်မကကြီးမြင့်ပါ​စေ။
Ko Kyawtoe says:
2021-10-08 at 11:18 AM
Thanda Kyaw says:
ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိတဲ့ဒီမိုက​ရေစီသူရဲ​ကောင်းဆုပါ။ သံအမတ်ကြီးကို​လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်။
ချိုချို ဦး says:
2021-10-08 at 12:11 PM
Myint Myint Kyu says:
2021-10-08 at 1:01 PM
Big Congratulation !👏👏👏ပါရှင့် သံအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်း ကျန်းမာပါစေ။
Hnin Nu says:
2021-10-08 at 1:44 PM
စကစ ဘက်ကို ပါသွားရင် ဒုက္ခဆိုပြီး
Ei Ei Nyein says:
2021-10-08 at 2:00 PM
2021-10-08 at 2:33 PM
သံအမတ်ကြီး ကျန်းမာစွာ တာဝန်များထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေ😍
2021-10-08 at 4:03 PM
Congratulations ပါဦးေက်ာ္မိုးထြန္း ေအာင္ျမင္ပါေစ။က်န္းမာပါေစ။ျမန္မာ့ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးအျမန္ဆံုးေအာင္ျမင္ပါေစ။
Radio NUG – Oct 8th, 2021 Morning